लोकप्रिय हुँदै तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्क ! - jagritikhabar.com
लोकप्रिय हुँदै तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्क !
शारीरिक सम्पर्कका विभिन्न तरिकाका बारे धेरै थरि बहस हुन्छ । यी बहसहरूमध्ये पछिल्लो समय चर्चा शुरु भएको छ तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्क ।
केही अनुसन्धानले तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्कमा सहभागी जोडीले भरपुर सन्तुष्टि पाउने उल्लेख छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार युवाहरु तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्कमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।
तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्कमा शारीरिक सम्पर्क कायम गर्ने वातावरण शान्त, खुला र एकान्त हुनुपर्छ । अध्यारो कोठामा मैन बत्ती बालेर धिमा प्रकाशमा सजिलो र फराकिलो बेडको व्यवस्थामा गरेर बनाइने शारीरिक सम्पर्कलाई तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्क भन्छन् ।
शरीर नछोइकन सामिप्यता महसुस भएपछि मात्र अन्य क्रियाकलाप क्रमश सक्रिय हुन थाल्छन् । दुवैजना भावनात्मक रुपले तयार भएपछि सामान्य विधिबाट गरिने शारीरिक सम्पर्कलाई तान्त्रिक शारीरिक सम्पर्क भनिन्छ ।
नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाका विभिन्न देशमा यो सम्पर्कको तरिका बढ्दै गएको छ । अहिले त व्यवसायीक व्यक्तिहरुले सेवा नै उपलब्ध गराइरहेकोपनि तथ्यले खुलाएको छ ।
दम्पतीले आफ्नो शारीरिक सम्पर्कबाट सधै एकनासले सन्तुष्ट लिइरहेका हुँदैनन् । कुनै समय उनीहरु शारीरिक सम्पर्कबाट भरपुर आनन्द लिन्छन् भने कहिले सामान्य । शारीरिक सम्पर्क क्रिया एउटै हो । तर सन्तुष्टिको स्तर किन फरक ?
किनभने यसमा दम्पतीको मुड, वातावरण, स्थान, समय सबैकुरा निर्भर गर्छ । शारीरिक सम्पर्कका लागि सबैभन्दा प्रमुख त दम्पतीको भावनात्मक अवस्था नै हो । यदि दुवै जना शारीरिक सम्पर्कका लागि तत्पर छन् भने त्यसबाट उनीहरुले पर्याप्त सुख प्राप्त गर्न सक्छन् ।